I-Sprint - lokhu kuyintando yenombolo yokugcina yokuqala
Ezemidlalo nokuPhepha, Track and field field
Lapho kuqala ukushisa, imidlalo yebusika idonsela inani elikhulu lababukeli nabalandeli. Okuvamile futhi okudumile yi-biathlon. Lolu uhlobo lwezemidlalo oluhlanganisa umjaho we-skis nokudubula emathekheni avela esibhamu. Enye yezinhlobo ezinhle kakhulu zokugijima yi-sprint. Ake sicabangele ngokuningiliziwe.
Lona uhlobo lokugijima kwe-ski lapho abagijimi beya emthonjeni ngezikhathi ezithile ezinemizuzwana engu-15. Isikhathi sokuhamba kumdlali ngamunye singumuntu ngamunye, ngakho akekho umehluko kwinombolo yokuqala. Ibanga lamadoda liyi-10 km, lapho kukhona khona amabanga amabili okudubula.
Ngokuhambisana nemithetho, isibhamu kumele sibe nesisindo esingenani 3.5 kg. Le nto esindayo ixhomeke emahlombe womdlali, okudingeka asebenze isitayela samahhala se-3. Ukuqhathanisa: i-sprint ingu-10 km ukugijima kwe-ski ngezitini emahlombe.
Ngemuva kokuqala kokuqala, abagijimi bangena ebangeni lokudubula. Kumele bashise emaceleni abekwe phansi. Ibanga elibhekiswe kulitshe liyimitha engama-50. Izinhloso ezi-5 zinikezwa ama-round 5. Ukudubula kokuqamba amanga kubhekwa njengokulula, ngakho-ke kuyadingeka ukuba ufike phakathi nendawo yehlombe - umbuthano we-45 mm. Ngalinye iphutha, kukhona umbuthano wezinhlawulo, okungamamitha angu-150.
Ngemuva kwesigcawu sesibili somzila, kufanele ume ngokuqondile. Le nqubo yinkimbinkimbi kakhulu, ngakho-ke ilitshe liba nobukhulu obukhulu. Kuyi-115 mm.
Izinhlamvu abadlali abadubulayo zilula kakhulu. Umoya ungawadonsula kalula kusuka emgwaqeni owenziwe. Lokhu okuvelele komncintiswano. Ngezinye izikhathi abagijimi bangase bazithole bezingekho ngokwezinga, futhi lowo oyinqobe uyoba nguye oyokwazi ukungena esikhathini esithule kakhulu.
Amadoda ase-Sprint aqedile ngemuva kokudlula nxazonke sesithathu, lapho inqwaba yanoma iyiphi i-ski iqeda umugqa wokugcina.
Lona uhlobo lomhlanga we-biathlon, lapho umuntu engabikho khona amamitha angeziwe atholakala, futhi hhayi umzuzu owodwa wokujeziswa. Umehluko omkhulu yiyona ibanga amantombazane adinga ukunqoba. Kuyi-7.5 km. Ithrekhi inemibuthano engu-3 (ngayinye ingu-2.5 km) nezindawo ezimbili zokudubula.
Ama-biathletes azikhethela ngokuzikhethela izikhundla zokudubula emaceleni. Iphutha ngalinye liletha lo mqhudelwano ngamamitha angu-150 engeziwe. Ngemuva kokuphela komncintiswano, uhlu lwabahlanganyeli emncintiswaneni wokuphishekela lubekwe ngokusekelwe emiphumeleni yomncintiswano. Inombolo ngabagijimi abangu-60 besifazane.
Ngenxa yemiphumela engalindelekile, abalandeli bathanda i-biathlon. Ukufiphaza abesifazane bagijima kunoma yisiphi isimo sezulu, futhi inombolo yokuqala yokuqala ingaba ukunqoba.
Iqukethe izigaba eziningana. Abesifazane namadoda anamatafula ahlukene anezibuko. Endaweni ngayinye enikezwe inombolo ethile yamaphoyinti. Ngemuva kokuba abadlali be-40 bangatholi amaphuzu. Kuyo yonke inkathi, amaphuzu ayengeziwe. Umdlali, oqoqile ngaphezu kwamanye, uthola umklomelo omkhulu - i-glostal globe.
Ngaphandle kwakhe, kuneminye imiklomelo. Lezi zingcosana ze-crystal globes, ezingatholakala kuwo wonke uhlobo lomncintiswano. Ngokuba abesifazane besiprint bazolwa ngokwehlukana, kungaba ngomncintiswano wokuphishekela noma ngokuqala kokuqala. Amaphuzu atholakale kule mikhankaso abuye akhokhe isikweletu somhlaba omkhulu we-crystal.
I rocket yaseBelarusian
Phakathi kwabadlali abavelele, awukwazi ukuphuthelwa odumile uDaria Domracheva. Wachitha ebuntwaneni bakhe eRussia, kodwa wabe eseya eMinsk futhi waqala ukuncintisana neqembu likazwelonke laseBelarus.
Isikhathi esiphumelele kunazo zonke ngoFebhuwari 2014. Ngaleso sikhathi uDaria wayinqoba i-sprint yama-Olympic futhi wathola i-jersey ephuzi yomholi. Kuye, abaningi bavele babheke i-biathlon.
Ukuphrinta abesifazane kugijimelana, kodwa kugxile kubaholi. Ngakho-ke, abalandeli abakwazi ukuhlala bengalindelekile, banikezwe abahlaziyi bamaphephandaba nabahlaziyi.
Abadlali abahle kakhulu
Ngaphandle komdlali weBelarusian, kubalulekile ukukhomba amanye amantombazane. Ziyamthanda amazwe amaningi emhlabeni. Phakathi kwabaholi yiRussia, eJalimane naseNorway. U-Olga Zaitseva, u-Ekaterina Yurlova, uSvetlana Ishmuratova no- Albina Akhatova baziqhenya ngokuziphakamisa imibala yefulegi laseRussia. U-Diesel Ears, uKatherine Wilhelm, uMagdalena Neuner, u-Andrea Henkel uvame ukuvuka kuleli podium ngefulegi laseJalimane.
I-Sprint ayilona uhlobo olubi kakhulu lomncintiswano, kodwa futhi nombukiso obalabala kakhulu ohlanganisa abantu, uveza uthando lwezemidlalo futhi ugcine ukukhathazeka kuze kube nenombolo yokugcina yokuqala.